Galaxy S20 စီးရီးမှာ ဘာတွေပြောင်းလဲလာပြီလဲ? ဝယ်သင့်လား?
ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၂ ရက်နေ့မှာ တမူထူးခြားတဲ့ ဒီဇိုင်းနဲ့ ထွက်ရှိလာတဲ့ Galaxy S20 စီးရီးကို မြင်ဖူးနေကျပြီ။ အွန်လိုင်းတွေမှာ ထူးခြားချက်တွေကို ပြောနေကျပြီဆိုတော့ ဘာတွေ အဆန်းထွင်ထားပြီလဲ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
3 Galaxy S20 Models
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလိုပဲ မော်ဒယ် ၃ မျိုး မိတ်ဆက်ထားပြီး စာဖတ်သူတွေ သိထားတဲ့အတိုင်း S20 ၊ S20+ နဲ့ S20 Ultra (Compare S10e ၊ S10 ၊ S10+) တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းမကြေညာခင်တုန်းက S11 နာမည်နဲ့ ပေါက်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီး iPhone တွေလို Entry Level ကို S20 လို့ ခေါ်ဆိုပြီး ကင်မရာပိုင်း ပိုကောင်းတဲ့ မော်ဒယ်တွေကိုတော့ Plus ၊ Ultra လို့ ပြောင်းသုံးလာပါတယ်။
S20 မော်ဒယ်အားလုံးဟာ 5G နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့ စမတ်ဖုန်းတွေ ဖြစ်တာနဲ့အညီ အမြန်ဆုံး ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုစနစ်ကို အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ ဒါကြောင့် 1080p Video Call တိုက်ရိုက် ပြောဆိုနိုင်မယ့်အပြင် Live Caption Feature လည်း ပါဝင်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
QHD+ Display (120Hz Optional)
Samsung ဖုန်းတွေကို Display တစ်ခုထဲနဲ့တင် ကြွေဆင်းရလောက်တယ်လို့ ပြောနိုင်တယ်။ စီးရီးတစ်ခုပြီးတစ်ခု ပိုကောင်းလာသလို အခု S20 စီးရီးတွေမှာ Infinity-O Display နည်းပညာက မက်လောက်စရာ ဖြစ်လာပါတယ်။
Selife ကင်မရာတစ်ပေါက်စာနေရာကို S10 စီးရီးတွေထက် ပိုသေးအောင် လုပ်နိုင်လာသလို S10e တုန်းက Flat Screen ဖြစ်နေပြီး Resolution လျှော့ထားတာမျိုး မရှိပါဘူး။
S20 ၃ မျိုးလုံးမှာ 3200 x 1440 (QHD+) Resolution အသုံးပြုထားပြီး HDR10+ ၊ 120Hz Refresh Rate ထောက်ပံ့မှုတွေ ပါဝင်လာတယ်။
ဒီနေရာမှာ စာဖတ်သူတွေ တမျိုးထင်သွားနိုင်တာက FHD+ Resolution မှာပဲ 120Hz အသုံးပြုနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်
Samsung အနေနဲ့ Dyanmic OLED Panel ကို Resolution Cap ထားပြီး QHD+ Setting မှာ 60Hz နဲ့ အလုပ်လုပ်အောင် Lock ချထားနိုင်တယ်။
ဒါကို သီအိုရီအရ သုံးသပ်တာဖြစ်ပြီး 120Hz Refresh Rate ထောက်ပံ့တဲ့ Display Panel တစ်ခုဟာ ဘယ် Resolution မှာမဆို Hardware နိုင်ရင်နိုင်သလောက် 120Hz အပြည့်တွန်းမှာပါ။
အဓိကပြဿနာ ဘာလဲဆိုတော့ ပါဝါပိုင်း လိုအပ်ချက်ကြောင့် ဘက်ထရီစားမယ့် Risk ရှိမယ်၊ အထူးသဖြင့် ဂိမ်းကစားရင် အပူလွန်ကဲပြီး Power Load များတဲ့အချက်ကို ရှောင်ရှားဖို့ဖြစ်မယ်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်
ဒါကြောင့် 120Hz ကို Optional အနေနဲ့ FHD+ Resolution (ဂိမ်းကစားဖို့အဓိက) မှာပဲ အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။ (No Comments)
Galaxy S20 Stands for Cameras
ကင်မရာလို့ ပြောတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့ နည်းပညာလောကမှာ Samsung ရယ် Apple ရယ် Pixel ရယ် 12MP ကနေ မတက်ဘူး၊ တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် Sensor ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပြီး မိတ်ဆက်မယ်လို့ ထင်ကြေးပေးခဲ့တာ အခုတော့ တလွဲဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ
အထူးသဖြင့် S20 Ultra မှာ အသုံးပြုထားတဲ့ 108MP (Wide) ကင်မရာနဲ့ 48MP (Periscope) Lens တွေဟာ Key Player ဖြစ်လာတယ်။ စာဖတ်သူတွေ ဗဟုသုတရအောင် Samsung ထုတ်ကြွားလိုက်တဲ့ 108MP အကြောင်းကိုပါ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ISOCELL Bright Sensor
48MP ပထမဆုံး မိတ်ဆက်တုန်းက 4-in-1 Pixel-binning (0.8μm x4= 1.6μm) လုပ်ပြီး 12MP ဓာတ်ပုံ အရည်သွေးရအောင် ဖန်တီးခဲ့တာ မှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်။
ဒါရဲ့ ​နောက်ကွယ်မှာ Samsung အ​ခေါ် Tetracell နည်းပညာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး S20 Ultra ၊ Mi 10 ၊ Mi Note 10 Pro စမတ်ဖုန်းတွေမှာ ပါဝင်လာတဲ့ 108MP Sensor မှာ​တော့ Tetra ကိုပဲ အဆင့်မြင့်ထားတဲ့ Nanocell လို့ ခေါ်ပါတယ်။
သီအိုရီအရ ယှဥ်ပြောရရင် Tetracell မှာ 2×2 Pixel Structure အသုံးပြုပြီး Nano မှာ 3×3 Pixel Structure သုံးထားပါတယ်။ ဒါကြောင့် (0.8μm x2= 1.6μm) Versus (0.8μm x3= 2.4μm) Pixel ရှိတဲ့အတွက် Tetra နည်းပညာထက် အလင်းဝင်အားပိုကောင်းတယ်
Low-light Performance ပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောနိုင်သလို 9-in-1 Pixel-binning နည်းပညာကြောင့် 108MP Sensor ဟာ 12MP Resolution မှာ Upscaling လုပ်စရာမလိုဘဲ 3x Lossless Zoom Quality နဲ့ ရနိုင်မယ်။
ဒါ့အပြင် Smart-ISO ကိုပါ ထည့်သွင်းလာပြီး S20 Ultra မှာ 6400 ISO Range အတွင်း အသုံးပြုနိုင်မယ်၊ အထူးခြားဆုံးကတော့ အလင်းရောင်နည်းပါးချိန်မှာတောင် 8K ဗီဒီယိုတွေကို 24fps နှုန်းနဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဗီဒီယိုအပိုင်းမှာပါ အဆင့်မြင့်ထားပြီး Real-time HDR ၊ Electronic Image Stabilization (EIS) ၊ Super-PD (Phase Detection) နဲ့ Auto-focus အတွက် Advanced Phase Detection နည်းပညာနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
S20 စီးရီးမှာ အဓိကပြောင်းလဲလာတာ ကင်မရာလို့ ကျနော်ဖော်ပြဖူးတဲ့အတိုင်း S20 Ultra မှာ Hybrid Optical Zoom ကို 5x ၊ Digital Zoom ကိုတော့ 100x အထိ ဆွဲရိုက်နိုင်မှာပါ။
Samsung ကတော့ Space Zoom လို့ တင်စားထားပြီး S20 ၊ S20+ စမတ်ဖုန်းတွေမှာတော့ Optical Zoom ၃ ဆ နဲ့ Digital Zoom ကို အဆ ၃၀ အထိ အသုံးပြုလို့ရမှာပါ
Single Take A.I
ပွဲမှာ မိတ်ဆက်တုန်းက S20 စမတ်ဖုန်းတွေရဲ့ ကင်မရာ A.I လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု ကြေညာသွားပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ Single-take Mode ကို ၁၀ စက္ကန့်လောက် ဖိထားလိုက်ရင် Live Focus ၊ Ultra-wide ၊ Video စသဖြင့် ကင်မရာ ၃ လုံး Function ကို တစ်ချိန်ထဲမှာ အသုံးပြုသွားမယ့် Feature ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Gimmick လို့ မပြောလိုပေမယ့် ရိုက်ကူးလိုက်တဲ့ အနေထားမှန်သမျှကို Gallery App ထဲမှာ Category ခွဲပြီး ဖော်ပြပေးမယ်၊ ရည်ရွယ်ချက်က ကင်မရာ ၁ လုံးချင်းစီရဲ့ Function ကို တစ်ခါစီ ပြောင်းရိုက်စရာမလိုအောင် သီးသန့်ထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Galaxy S9 ၊ S10 စီးရီးတွေနဲ့ ယှဥ်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ကင်မရာ စွမ်းဆောင်ရည်က အတော်လေး စကားပြောသွားပါပြီ။ Gimmick ဖြစ်တဲ့ Dual Aperture (f/1.7 ~ f/2.4) ကို ဖြုတ်ချပစ်လိုက်ပြီး S20 ၊ S20+ ဖုန်းတွေရဲ့ Primary Sensor (12MP) ဟာ Pixel အရွယ်စားပိုကြီးလာတယ်။
အထူးသဖြင့် Tele-lens မှာ သိသာတဲ့ ပြောင်းလဲမှု မြင်လာရပြီး S20 ၊ S20+ မှာ 3x Optical Zoom နဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်တယ်၊ နောက်တစ်ချက်က Ultra-wide Lens မှာ Pixel အရွယ်စား ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း ပိုကြီးလာတဲ့အတွက် Low-light စွမ်းဆောင်ရည်တွက် အထောက်ကူဖြစ်စေမှာပါ။
စာဖတ်သူတွေ မြင်သာအောင် ပုံနဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်
S20 Series Camera Comparison
Exynos with 5G Modem
အခုလို ကင်မရာပိုင်းမှာ အသားကုန် စွတ်တင်ထားပြီး Process လုပ်ဖို့အပိုင်းမှာ ဂွမ်းနေရင် မဖြစ်ဘူးလေ၊ 2020 ဆိုတာက 5G ခေတ်လည်း ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ In-house 5G Modem 5123 ပါဝင်လာတဲ့ Exynos 990 SoC ကို S20 စီးရီးတွေမှာ အသုံးပြုလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ထူးခြားချက်တွေကတော့ A.I ပိုင်းတွက်ဖြစ်ပြီး Neural Processing Unit (NPU) ၊ Digital Signal Processor (DSP) Unit တွေကို Exynos 990 SoC ထဲမှာ ပေါင်းစပ်ထားပြီး S20 စီးရီးမှာ အရေးပါဆုံး ကင်မရာလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို အားဖြည့်ဖို့ပါ။
S20 S20+ S20 Ultra
SoC Snapdragon 865 (US & China) or Exynos 990
RAM (LPDDR5) 12GB 12GB 16GB
Storage 128GB 256/512GB 512GB
Battery 4,000 mAh 4,500 mAh 5,000mAh
Price 5G Models ($ MSRP) 999 1,199 1,399
ဒုတိယအနေနဲ့ System Performance ပိုင်းအတွက်ဖြစ်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ စွမ်းအင်ခြွေတာမှုအပိုင်းမှာ Improve ဖြစ်လာဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
S20 မော်ဒယ်အားလုံးမှာ LPDDR5 (Low Power Double Data Rate) RAM သုံးလာပါတယ်။ ၂၀၁၉ Flagship စမတ်ဖုန်းတွေမှာ LPDDR4X RAM ကိုပဲ သုံးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကွာခြားချက်ကို ထောက်ပြရရင် ပါဝါစား ၁ ဆခွဲ သက်သာပါတယ်။
Random Access Speed က 5,500 MB/s ရှိတဲ့အတွက် 44GB ရှိတဲ့ဖိုင်ကို ၁ စက္ကန့် ၊ ၂ စက္ကန့်အတွင်း Data Transfer လုပ်ပေးနိုင်မယ်။ 4,266 MB/s ရှိတဲ့ LPDDR4X နဲ့ယှဥ်ရင် ၁.၃ဆ ပိုမြန်လာပြီလို့ သုံးသပ်ရမှာပါ။
Better Battery with 25W Fast Charging
S10 စီးရီးတွေအထိ 18W Fast Charging ကိုပဲ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ Samsung ၊ ဒီတစ်ခါမှာတော့ 25W (S20 ၊ S20+) 45W (S20 Ultra) ဖုန်းတွေအတွက် ထည့်ပေးလိုက်ပါပြီ။
Battery ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း 4,000 mAh (S20) ၊ 4,500 mAh (S20+) နဲ့ 5,000 mAh (S20 Ultra) သုံးပစ်လိုက်သလို Li-ion ကနေ Li-Po အမျိုးစား ဖြစ်လာပါပြီ။ သိရသလောက်ဆိုရင် 5,000 mAh အပြည့်သွင်းဖို့ ၅၈ မိနစ်ပဲကြာပါတယ်။
Galaxy S20 စီးရီးကို ဝယ်သင့်လား?
ဒီမေးခွန်းကို ဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ Recommend ပေးဖို့ခက်ပါတယ်။ S20 စီးရီးမှာ အဓိက ပြောင်းလဲလာတာက ကင်မရာ Improvement ပါ။ iPhone 11 စီးရီးနဲ့ iPhone XS ၊ XR တို့ကွာသလို သိသာတဲ့ပြောင်းလဲမှုမျိုး ပါဝင်လာတဲ့အတွက် ရွေးချယ်သင့်တဲ့ ဖုန်းလို့မြင်ပါတယ်။
Galaxy S20 Available Colors
ဒါပေမယ့် ဝယ်ဖို့ မတိုက်တွန်းချင်တဲ့ အကြောင်းပြချက်က Flagship ဖုန်းကောင်းကောင်း ကိုင်ချင်တယ်၊ စိတ်တိုင်းကျတာမျိုးဖြစ်ရမယ်ဆိုရင် HUAWEI P40 ၊ OnePlus 8 ၊ OPPO Find X2 တို့ထွက်ဖို့ကျန်နေသေးပါတယ်။
MWC 2020 ပွဲပျက်သွားတဲ့အတွက် ထွက်ရှိမယ့် Flagship ဖုန်းတွေကို စောင့်ကြည့်စေလိုပြီး Samsung Fans တွေအတွက်ကတော့ သီးသန့်ပြောနေစရာမလိုဘူးထင်ပါတယ်။
မတ်လထဲမှာ ရောင်းချသွားတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဝယ်ဖို့စိတ်ကူးထားရင် Pre-order တင်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့ဦး၊ လက်ဆောင်တွေရနိုင်တာမလို့ပါ။
Reference: Samsung Homepage ၊ Samsung NewsRoom ၊ GSMArena ၊ Android Central
2020 iPhone တွေမှာ ကိုယ်ပိုင် 5G Modem အသုံးပြုလာမယ့် Apple